इमेज अवार्ड कस-कसले लगे ? (विवरण सहित) – manoranjansansar.com | A Entertainment News portal for all
इमेज अवार्ड कस-कसले लगे ? (विवरण सहित)
काठमाडौं। हिजो काठमाडौंको आर्मी अफिसर क्लबमा आयोजना भएको ईमेज अवार्डको १६ औं संस्करणमा गीत संगीतका २३ विधामा स्रष्टाहरुलाई सम्मान गरेको छ । २०७० साल असार १ गतेदेखि २०७१ साल जेठ मसान्तभित्र सार्वजनिक भएका गीत, एल्बम तथा म्यूजिक भिडियोहरु मध्येबाट २३ विधाका स्रष्टाहरुलाई सम्मान गरिएको हो । कार्यक्रममा यसवर्ष सुगम पोखरेलको स्वरमा रहेको मेरो जीवन बोलको गीतले सर्वोत्कृष्ट गीतको अवार्ड प्राप्त गर्‍यो । यस्तै, खाएको कसम बोलको गीतबाट सुमन कुमार श्रेष्ठले सर्वोत्कृष्ट गायकको अवार्ड प्राप्त गरे भने खुशी मागे बोलको गीतबाट अञ्जु पन्तले उत्कृष्ट गायीकाको अवार्ड प्राप्त गरिन् ।
यो वर्ष अझै बाँकी गीतबाट स्रोता र दर्शकको मतको आधारमा छानिने पब्लिक च्वाइस अवार्ड गायक राज सागरले प्राप्त गरे । यस्तै, विश्वासलाई बोलको गीतबाट विश्व नेपालीले सर्वोत्कृष्ट पप गायकको अवार्ड प्राप्त गरे भने जबसम्म बोलको गीतबाट सुमी चाम्लिङ राइले सर्वोत्कृष्ट पप गायिकाको अवार्ड प्राप्त गरिन् । तिम्रो मायाँ बोलको गीतबाट राजबाबु श्रेष्ठ सर्वोत्कृष्ट गीतकार ठहरिए भने साझ प¥यो बोलको गीतबाट सुनील मास्केले सर्वोत्कृष्ट संगीतकारको अवार्ड प्राप्त गरे । यसैगरी मन बोलको गीतबाट सर्वोत्कृष्ट समूह गायनमा अमन प्रधान र अक्षता अधिकारीले तथा चलचित्र झोलेको तिमीनै बोलको गीतबाट राजेश पायल राई, रजिला रिमाल र हरी लम्सालले उत्कृष्ट चलचित्र गीतको अवार्ड प्राप्त गरे ।
यस्तै, सर्वोत्कृष्ट नव कलाकारको अवार्ड उडी उडीका लागि शिखा भारतीले प्राप्त गरिन् । यो वर्ष नेपाल बोलको गीतबाट आशिष श्रेष्ठ र चन्दन श्रेष्ठले सर्वोत्कृष्ट राष्ट्रिय भावनाले ओतप्रोत गीतको अवार्ड प्राप्त गरे । यस्तै चन्द्रमुखी बोलको गीतबाट महाराज थापाले सर्वोत्कृष्ट संगीत संयोजन र साझ पर्‍यो गीतको बोलबाट किशोर थापाले सर्वोत्कृष्ट गीत मुद्रणको अवार्ड प्राप्त गरे । यसैगरी पशुपती शर्माको चिन्ता छैन केही बोलको गीतले सर्वोत्कृष्ट दोहोरी गीतको अवार्ड प्राप्त गर्‍यो । दसै बोलको गीतबाट कृष्ण रेउलेले सर्वोत्कृष्ट लोक गीत संकलनको अवार्ड हात पारे भने फूल फुलेरैबाट रामजी खाँड र सम्झना लामिछानेले सर्वोत्कृष्ण गायन दोहोरी गीतको अवार्ड प्राप्त गरे ।
आमाको सम्झना गीतबाट टीका पुनले सर्वोत्कृष्ण गायन लोकगीतको अवार्ड प्राप्त गरिन् । सम्झनामा बोलको म्युजिक भिडियोले सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियोको अवार्ड प्राप्त ग¥यो भने म्युजिक भिडियो निर्देशकको अवार्ड प्रणव जोशीले प्राप्त गरे । यसैगरी धिरजजङ्ग शाह सर्वोच्कृष्ट म्युजिक भिडियो निर्देशक छानिए भने हिमाल जोशीले सर्वोत्कृष्ट म्युजिक भिडियो सम्पादनको अवार्ड प्राप्त गरे । हरेक बर्ष झैं यस बर्ष पनि विभिन्न विधामा मनोनयनमा परेकाहरु मध्येबाट निर्णायक मण्डलबाट र एस.एम.एसबाट प्राप्त मतका आधारमा विजेताको घोषणा गरिएको हो । इमेज अवार्डमा यस वर्षदेखि सर्वोत्कृष्ट गायन लोकगीत र दोहोरीगीत गरी २ ओटा विधा थप गरिएको थियो ।
कुन्तीको पलेँटीमा ‘खुट्टा तान्दै गर’…
भगवान सगँ के मागिन दीपिकाले ?